Mmiri mmiri na-ewepụtakwa ume ọhụrụ Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Mmiri mmiri na-ewepụtakwa ume ọhụrụ
Tomas Bigordà | | Ike mmiri, Efu Ike, Ike imeghari ohuru
N'ezie oke osimiri nwere ikike di uku mepụta ike. O di nwute, nke a adighi eji ya eme ihe maka otutu ihe.
Ike mmiri ma ọ bụ ike nke oké osimiri bụ nke dịgasị iche icheDị ka ebili mmiri, ebili mmiri, oke osimiri, mmiri ozuzo na mmiri nnu.
Anyị nwere ike kewaa ha n'ọtụtụ dị iche iche, dịka nrụnye ifufe nke dị n'oké osimiri, yana iji mmiri biomass, ọ bụ ezie na ebumnuche nke post a ga-anọ n’akụkụ ebe ha abughi ojiji nke otutu mmiri nnu.
1 Dị ike mmiri
1.1 Ebili ike
1.2 Ike miri emi
1.4 Ndị nnu saline
2 Etu esi enweta ike a
Dị ike mmiri
A na-akpọkarị ya "moto ebili“Ọ bụ nke dị ugbu a kacha mepee emepe, na teknụzụ dị iche iche mepụtara na-egosi nnukwu mmasị ọ nwere na mpaghara ume ọkụ.
Akọwapụtara ike ebili mmiri dị ka ike mmiri nke enwetara site na ijide ikike kinetic dị na ngagharị nke mmiri nke oke osimiri na oke osimiri.
Ebili mmiri bụ nsonaazụ nke ifufe na elu mmiri. Ifufe a sitere na isi ntinye ume nke mbara ala: ike anyanwụ. Ike nke dị na mbugharị mmiri osimiri dị oke. N'ebe ụfọdụ ebe ọrụ ebili bara ụba, ike ọrụ ike echekwara na mmegharị a gafere 70MW / km2.
Ike miri emi
A makwaara dị ka "ogbaraNke ahụ ọ bụ ike na-eji ohere nke ịrị elu na ọdịda nke mmiri nke oke osimiri site na ike ndọda nke anyanwụ na ọnwa meputa oku eletrik. Ya mere, ọ bụ ihe eji emegharị emegharị na enweghị ike ngwụcha nke na-eji ike ebili mmiri mepụtara n’oké osimiri anyị.
N'okwu a, ihe ndọghachi azụ bụ isi bụ ebe ebe enwere ọdịiche dị na ịdị elu nke buru ibu nke na bụrụ uru site na echiche aku na uba iji rụọ ọrụ akụrụngwa.
na Oke Osimiri Ihe ndị a bụ ihe ịtụnanya nke na - eme n’okirikiri mmiri site na iji mmiri eme ihe site na mpaghara miri emi.
A na-ahụkwa mmalite ya na ọrụ nke ifufe na mmiri, nke na-ebelata ike mgbe mmiri na-abawanye. omimi.
Ndị nnu saline
Banyere gradients, enwere ugbua uzo abuo iji aru ike ha.
N'otu aka, ihe dị iche na okpomọkụ dị n'etiti oke mmiri mmiri na nke miri emi, nke nwere ike ịmịnye ya na teknụzụ n'akụkụ ndị ahụ dị na akara ụwa ma ọ bụ na mpaghara ebe okpomọkụ, ọkachasị n'ihi ngbanwe nke okpomọkụ n'akụkụ n'afọ niile.
Enwere ike iji gradients saline mee naanị ebe enwere ụdị mmiri nwere nnu dị iche iche. Nke a n'ozuzu na-ewere ọnọdụ n'ọnụ mmiri.
Etu esi enweta ike a
Ọ bụrụ na anyị elekwasị anya na ojiji nke ike mmiri, nke fọrọ nke nta ka enweghi ngwụcha n'ụwa niile.
Ọ bụ ike nke ebili mmiri na nke ka elu, ọ bụ ezie na nke ahụ apụtaghị na ike ikuku Ejighi ya eme ihe n'ụzọ dị ịrịba ama ruo ọtụtụ afọ, mana naanị n'ebe ụfọdụ ebe enwere ọnọdụ pụrụ iche, ebe ọ bụ na ejiri ya mee ihe metụtara oke mmetụta gburugburu ebe obibi, ha bụkwa ebe nwere uru gburugburu ebe obibi pụtara ìhè.
N'ebe nwere oke mmiri ugbu a, nsogbu a nwere ike ịbụ nke ọzọ, ọ dịkwa nnukwu njupụta okporo ụzọ mmiri nke enwere ike ịnwe ebe ndị a, ọ bụ ezie na ebe miri emi zuru oke, nsogbu nwere ike pere mpe.
Ojiji nke gradiants, ugbu a, ọ baghị uru. Agbanyeghị, nke a akwụsịbeghị nyocha.
Europe abụrụla mpaghara ọsụ ụzọ n'iji ebili mmiri, ọkachasị mpaghara Ido Scotland y Portugal, ọ bụ ezie na emesịa agbakwunyere mba ndị ọzọ, ụfọdụ n'ime ha bụ España, tumadi obodo kwụụrụ onwe nke ụsọ oké osimiri Cantabrian, yana Galicia.
Enwere otutu oru eweputara rue ugbu a, nwere nsonaazụ dị iche, mana nkwado siri ike nke gọọmentị dị iche iche maka mmepe nke mpaghara a. Na mgbakwunye, enwere nnukwu mmasị site na nnukwu ụlọ ọrụ na-emegharị emepe, nke bụ mmalite maka ihe ịga nke ọma na ọkara okwu, na-enwe ike ịtụkwasị obi na ume ọzọ na-agbanwe agbanwe na ngwakọta ọkụ eletrik nke mba ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Efu Ike » Mmiri mmiri na-ewepụtakwa ume ọhụrụ
Erolọ efu, kacha ike rụọ ọrụ